Maraoka: Mafana mafana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Desambra 2018 15:13 GMT
Mbola tena mafana be ao Maraoka, mahatonga ny hafanana ho lohahevitra malaza eo amin'ny blogoma (bilaogy Maraoka) miteny Anglisy. Miaraka amin'ny maripàna matetika mahatratra 40 degre Celsius sy tsy fahampian'ny rivotra mangatsiatsiaka, toa tahaka ny hoe mijaly ireo bilaogera. Evelyn in Morocco, mpitsoa-ponenana ao Fez, mitolona amin'ny akanjo maotina mandritra ity onjan-kafanana ity:
Mafana, mafana, mafana
Tena mafana ny andro ary sarotra ny mahita akanjo sahaza hotafiana. Mba hitafy maotina sady mangatsiatsiaka no tena fanamby ho ahy. Mino tanteraka aho fa manana fandeferasana samihafa amin'ny hafanana ny Maraokana … indrindra ireo vehivavy. Ahoana koa no ahafahanao manazava ny fahafahan'izy ireo manao akanjo galaba * ambonin'ny akanjo hafa (matetika pyjamas) ary manampy fehin-tenda mifatotra tsara manodidina ny tenda? Vitsy ihany koa aza ireo manao voaly manarona ny tava ary maso sisa no miseho. Ary ny sasany indray manao izany rehetra izany amin'ny loko mainty. Mafana aho mijery azy ireo!.
* Antsoina ihany koa hoe Djellaba na jellaba ihany koa – akanjo misy satroka tafian'ny lehilahy sy ny vehivavy ao Maraoka.
Cory avy ao amin'ny 32n5w nisafidy ny hitaraina momba ny hafanana amin'ny alalan'ny tononkalo, indrindra ny haiku. Ireto ny sasany tamin'ny tononkalony:
Mafana loatra raha hitora-bato
Sy hitabataba ompa fanavakavaham-bolonkoditra
Tsy dia maninona loatra ny ankizy amin'izao fotoana izao
Mitombo ny sisiny (ourlets)
Noho ny maripànan'ny andro
Kitrokely ve izany???
Ny lohahevitra nahagaga tsy hita tao amin'ny bilaogy tamin'ity herinandro ity dia ny zava-misy fa nanamafy ny fiarovany i Maraoka, “milaza fa hisy ny fanafihana Islamista goavana hitranga,” araka ny filazan'ny Reuters. Cat in Rabat toa tsy mino izany zava-drehetra izany:
Koa efa telo andro izao ary mangingina ny zava-drehetra; hatramin'izao, tsy nisy ny loza. Na izany aza, alaim-panahy aho hanonona an'i Marvin ilay Marsiana ary manontany hoe: “Aiza ny kaboom? Tokony hisy kaboom manozongozona ny tany!” Tsy hoe tsy tony aho, fa inona no nitranga? Angamba nihozongozona ny SB. Voahozongozon'izany “… sambany ny manampahefana Maraonka nampiasa fiteny mazava sy teny voafaritra momba ny fandrahonan'ny mpampihorohoro.” Enyyy.
Ny lohahevitra hafa iray mafana (tsy misy kilalaon-teny) tamin'ity herinandro ity dia ny fanoratana momba ny dia fitsangatsanganana. Taorian'ny lahatsoratra navoakan'ny Wall Street Journal momba ny “mistika” any Maraoka, bilaogera maro no nanan-kolazaina momba izany. The View From Fez nitsikera ny lahatsoratra, nilaza hoe:
Oay! Ankehitriny, nitsoraka nankany amin'ny fanoratana manaitaitra manafintohina momba an'i Maraoka ny Wall Street Journal. Eny, mampalahelo nefa marina. Nirodana ny lasitra mahazatra andrasanao avy amin'ny WSJ .
Ao amin'ny lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe: Mistika mampidi-doza ao Maraoka, STAN SESSER iray no nahavita nahita mpampiesona bibilava sy toro-lalana hosoka tamin'ny andalana voalohany. Hevero fa lehilahy iray izay very tao Marrakech Medina izany … raha tao Fez izany, dia mety ho azontsika ihany.
The Morocco Report nilaza hoe:
Mandrosoa, Rupert Murdoch. Vidio ny Wall Street Journal. Tsy hoe ratsy noho izao akory.
(Tiako indrindra ny fomba namerenan'ny mpanoratra imbetsaka ny hoe “tsy azo antoka” i Maraoka ary mitanisa ireo mpanao vy very ny ainy tamin'ny baomba tao Casablanca ho ohatra, raha tsy namono na nandratra olona ankoatra ny tenan'izy ireo ihany izany)
Ao amin'ny lohahevitra farany tsy dia mafana loatra tamin'ity herinandro ity, Braveheart-does-the-Maghreb nahita kilalaon’ ankizy hafahafa tao amin'ny Souqs ao Rabat:
Mivarotra ireto eo amin'ny fidirana ao amin'ny Medina ireo mpivarotra. Tsy azoko antoka tsara ny fomba fijerin'ny Maraokana momba ny lalao navoaka. Bin Laden ve no niharam-boina? Manana baomba miafina eo ambanin'ny skateboard ve izy? Tsy manao izany ny famoaham-baovao eto [izay novakiako, ary efa novakian'ny Q] raha tsy manameloka an'i Bin Laden, ary azo antoka tanteraka fa tsy mandefitra amin'ny asa fampihorohoroana ataon'IZA NA IZA any Maraoka ny olona. Angamba mpizahatany fotsiny izy ireo sy mpila ravinahitra mividy ilay kilalao? Izay rehetra tianao hosafidiana, anao ny manapa-kevitra.
Sary avy amin'ny Braveheart-does-the-Maghreb